ट्राफिकले चिट का’टेको भन्दै बसपार्कमा रोड नै ब’न्द हुनेगरि गाडि ते’र्साएर चालक फरार ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारट्राफिकले चिट का’टेको भन्दै बसपार्कमा रोड नै ब’न्द हुनेगरि गाडि ते’र्साएर चालक फरार !
ट्राफिकले चिट का’टेको भन्दै बसपार्कमा रोड नै ब’न्द हुनेगरि गाडि ते’र्साएर चालक फरार !
राजधानीको नयाँ बसपार्कमा ट्राफिक प्रहरीले पाँच हजारको जरिवाना (चि’ट) का’टेको भन्दै पुरै रोड नै जा’म हुनेगरि गाडि ते’र्साइएको छ ।ट्राफिक नियम भन्दा बा’हिरगएर सवारी चलाएको पाईएपछि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना का’टेको थियो।
गाडि चलाउने चालकभने प्रहरीले विना कुनै गल्ति ज’रिवाना तिराएको भन्दै गाडी बिच सकडकमै रो’केर चाबि लिएर गा’एब भएका छन् । ज’रिवाना का’टिएका सवारी काठमाडौबाहिर जाने यात्रु बाहाक बस रहेका छन् । बिच सडकमै बस ते’र्साइपछि चक्रपथको सवारी आवागमन रो’किएको छ।
उता तुलसीपुरमा बसबाट ख’स्दा बसका सहचालक घा’इते भएको प्रहरीले बताएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ दुधरास पेट्रोल पम्प स्थित सोमबार बिहान साढे ८ बजेको समयमा तुलसीपुरबाट घो’राही तर्फ जादै गरेको रा १ ख २१७५ नम्बरको बसका सहचालक घाइते भएको ई’लाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ ।
घा’इते हुनेमा सोहि उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ बनगाउँ बस्ने वर्ष २० का निरज श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले बताएको छ । श्रेष्ठ ढोकामा उ’भिएको अवस्थामा बसले ज’म्प गर्ने क्रममा ख’सेर घा’इते भएको बताइएको छ । घा’इतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भईरहेको प्रहरीले बताएको छ । बस प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ ।